News under यातायात
चितवन । कुनै एक जमानामा सर्वाधिक सवारी साधन दुर्घटना हुने ठाउँका रुपमा परिचित थियो, जलबीरे । यहीँबाट यात्रुवाहक बसहरू त्रिशूली नदीमा खस्ने, घुम्तीमा ठोक्किने हुँदा कयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाए । अत्याधिक सवारी दुर्घटना भएपछि जलबीरे घुम्ती छेउमा एक मन्दिर बनाएर नियमित पूजा गर्न थालियो । मन्दिर बनेपछि यो ठाउँमा दुर्घटनामा कमी...
भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका ७ स्थित बागेश्वरी फुलिगाउँमा बा९०प १२७५ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा स्थानीय ४६ वर्षीय दामोदर लामिछानेको मृत्यु भएको हो । शनिबार राति करिब ९ बजे दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका लामिछानेको उपचारका क्रममा भक्तपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ...
ग्वार्कोमा गुडिरहेको टिपरमा अचानक आगलागी भएपछि...
ललितपुर &ndash; ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बिएन्डबी अस्पताल नजिकै एक टिपरमा आगलागी भएको छ। मंगलबार राति पौने १२ बजे ललितपुर महानगरपालिका&ndash;१७ बिएन्डबी अस्पताल नजिकै चक्रपथ सडकमा एक टिपरमा आगलागी भएको हो। सातदोबाटोबाट कोटेश्वर जाँदै गरेको बा २ ख ६८८७ नम्बरको टिपरमा आगलागी भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले जनाएको छ। वृत्तका अनुसार ढुंगामाटो (चिप्स) बोकेको उक्त...
काठमाडौँ । नेपालको राष्ट्रिय बसपार्कका रुपमा रहेको गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर आगामी बुधबारदेखि बन्द हुने भएका छन् । बसपार्कका टिकट काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टरका रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हाल सञ्चालन हुँदै आएका काउण्टर वैशाख १ गतेदेखि केही समयका लागि बन्द हुने भएका हुन् । नयाँ बसपार्क...
ट्राफिकले कारवाही गरेपछि चालकले गोंगबुको सडकमै तेर्साए बस,बाटो खुलाउन प्रहरी परिचालन
काठमाडौं &ndash; गोंगबुस्थित बसपार्कअगाडि रिङरोडमा ट्राफिक प्रहरीले यात्रुबहाक बसलाई रोकेर कारवाही गरेपछि चालकले त्यसको विरोध गदै सडकमै गाडी तेर्साएका छन् । आफ्नो गल्तीविना नै जरिवाना लिन खोजेको चालकको दाबी छ। त्यसपछि अरू बसका चालकहरूले पनि बस सडकमा तेर्साएर अवरोध गरे। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग बुझ्दा प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले यात्रुसँग बढी भाडा...
स्कुटर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु
कावासोती । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा बिहीबार राति स्कुटर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मत्यु भएको छ । खरकट्टा जङ्गलमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा कावासोती नगरपालिका २ का ३५ वर्षीय जीवन राना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले बताए । जङ्गलमा...
भैरहवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रक त्रिशुलीमा खस्यो : २ जनाको मृत्यु
काठमाडौं &ndash; भैरहवाबाट सिमेन्ट बोकेर काठमाडौंका आईरहेको ट्रक त्रिशूली नदीमा खस्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ । पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट लु१ख ७७६३ नम्बरको ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेको हो। मृत्यु हुनेमा काभ्रेको बनेपा नगरपालिका नालाका चालक ४५ वर्षीय विष्णु घिमिरे र सहचालक २८ वर्षीय सुमन सञ्जेल रहेका छन् । दुवैको ट्रकले थिचेर मृत्यु भएको...
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि एक सातासम्म दिउँसो बन्द हुने
भरतपुर &ndash; पहिरो रोकथामको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि नारायणगढ&ndash;मुग्लिन सडकखण्ड एक हप्ता दिउँसो बन्द गरिने भएको छ । आजदेखि २९ गतेसम्म एक हप्ता दिउँसो सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नारायणगढ&ndash;मुग्लिन सडक आयोजनाले सूचना जारी गर्दै सडकखण्डअन्तर्गत चारकिलोमा पहिरो रोकथामका आवश्यक बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सडक बन्द गर्न लागिएको...
काठमाडौं &ndash;नेकपा दाहाल&ndash;नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराई सवारी गाडीले एकजना साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएको छ। आइतवार जनकपुरमा प्रेस संगठनको कार्यक्रम सकेर रौतहटतर्फ आइरहेका उनी सवार सवार ज १ झ ४२७ नम्बरको गाडीले ठक्कर दिँदा करिब ६० वर्षीय इन्द्र प्रसाद घिमिरे घाइते भएका हुन्। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित पूर्व&ndash;पश्चिम राजमार्गमा नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता समेत...
काठमाडौं &ndash; यातायात व्यवसायीहरुले तेल र सवारीजन्य पार्टपूर्जामा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर ४० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले एक सातामै दुई पटक तेलको मूल्य बढाएपछि यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीधनीहरुले अहिले भाडादरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत माघ २९ गते नै विज्ञप्ति...
काठमाडौं &ndash; नयाँ चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिनेको संख्या पाँच लाख नाघेको छ । देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन् । गत वर्ष चैतदेखि कोभिड&ndash;१९ का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो । झण्डै १० महिनासम्म अनुमतिपत्र...
हिउँ परेपछि हेटौंडा–काठमाडौं यातायात अवरुद्ध
मकवानपुर - त्रिभुवन राजपथको सिमभञ्ज्याङ र अघोरमा हिउँ परेपछि हेटौंडा&ndash;काठमाडौंतर्फको यातायात सेवा आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको पालुङ इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सवारी साधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुने जोखिम देखिएकाले रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता इन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मौसम सुधार भएमा हिउँ पन्छाएर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी...
काठमाडौं &ndash; भक्तपुरको दूधपाटीमा एक सार्वजनिक यातायातका सह&ndash;चालकले यात्रुमाथि कुटपिट गरेका छन् । आइतबार बिहान बा ४ ख ७४१ नम्बरको बसमा यात्रुलाई कुटपिट गरेको पाइएपछि प्रहरीले सह&ndash;चालक २० वर्षीय सुदीप खड्कालाई पक्राउ गरेको छ । भक्तपुरकी एसपी तारादेवी थापाका अनुसार खड्काविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय,...
दक्षिणकालीमा ट्रक दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको दक्षिणकालीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ट्रक चालक मकवानपुर घर भएका ३१ वर्षीय मोहनलाल रुम्बा र सोही ट्रकका परिचालक अछाम घर भई काठमाडौं बस्ने २८ वर्षे गोमबहादुर बुढा छन् । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुवैको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले...
आजबाट लाइसेन्स आवेदनमा अनलिमिटेड फारम भर्न सकिने
काठमाडौं &ndash; यातायात व्यवस्था विभागले आजबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आवेदनमा कोटा प्रणाली हटाएको छ । लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिन पनि सस्ती हुने भएपछि विभागले दैनिक जति पनि संख्यामा सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गरेको हो । विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले अनलाइन सिस्टममा सुधार गरी आजबाट अनलिमिटेड फारम भर्न सकिने...
सुर्खेत &ndash; कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आज सवारीसाधनहरू बन्द गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरबाट सञ्चालित आठवटा यातायात व्यवसायीहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै बन्दको घोषणा गरेका हुन् । दुई महिना अगाडि मात्रै सञ्चालनमा आएको वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्कमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छलफल नै नगरी दुई ठुला यातायात प्रालिलाई संरचना बनाउन दिएपछि विवाद...
प्रचण्डको घर बेटीको गाडी अभिग्न अटो वर्क्सद्वारा कब्जा
काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारको घर दिने विवादास्पद ठेकेदार तथा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीले चढ्दै आएको गाडी मर्मत बापतको रकम नतिरेको भन्दै अटो वर्क्स (ग्यारेज) ले कब्जामा राखेको छ । कलंकी खसीबजारस्थित अभिग्न अटो वर्क्सले अधिकारीको बा. १३ च ७७२७ नं. को टोयोटा कम्पनीको र्&zwj;याभ फोर गाडी मर्मतबापतको...
सवारीमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली भोलीदेखी हट्ने
काठमाडौँ &mdash; उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले शुक्रबार(पुस ३ गते)देखिलागू हुनेगरी सवारीमा लगाइएको जोरबिजोर प्रावधान हटाएका छन् । जोरबिजोर हटाउनुअघि तीनवटै जिल्लाको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी)को संयुक्त बैठक बसेको थियो । तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संयुक्तरूपमा निर्णय गर्दै निजी तथा सार्वजनिक सवारीमा लगाइएको जोरबिजोर भोलिदेखि लागू हुनेगरी हटाएका हुन् । काठमाडौंका...
उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणालीलाई थप कडाई,८ सयभन्दा बढी सवारी कारबाहीमा
काठमाडौं - ट्राफिक प्रहरीले जोर&ndash;बिजोर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा सवारी जाँचमा कडाइ गरेको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भदौ २५ बाट लागू हुनेगरी उपत्यकाभित्र जोर&ndash;बिजोर प्रणालीअनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार कडाइ गरिएको हो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरभित्र चल्ने सवारी साधनलाई प्रहरीले कडाईका साथ चेकजाँच गरिरहेको छ...
काठमाडौं &ndash; यातायात व्यवस्था विभागले असोज २० गतेबाट सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन प्रस्ताव गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दै विभागले असोज २०देखि २५सम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्न प्रस्ताव गरेको हो । विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालका अनुसार दशैंमा जतिसक्दो छिटो उपत्यका छाड्ने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बिक्री...
नवलपरासी &ndash; पूर्व&ndash;पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दाउन्नेमा खसेको पहिरोमा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त पहिरोमा परी अन्य ७ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार साँझ विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका २ विश्वकर्मा बाबा मन्दिर नजिकै माथिबाट खसेको पहिरोले ना ५ ख ७९४० नम्बरको बस पुरेको थियो । लेदोसहित खसेको पहिरोले बस...
काठमाडौं &ndash; संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले गाडी भाडा बढाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अनेरास्ववियुसहित १३ विद्यार्थीहरुले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई मागपत्र बुझाउँदै बढाइएको ५० प्रतिशत भाडा घटाउन माग गरेका हुन् । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा सरकारले सिट क्षमताभन्दा आधा व्यक्ति राखेर...
चितवन &ndash; नारायणगढ&ndash;मुग्लिन सडक खण्डको चार किलोमा पहिरो खसेसँगै सडक पुनः अबरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित चार किलोमा बुधबार राति पुनः पहिरो खसेसँगै सडक अबरुद्ध भएको हो । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रमुख दयाकृष्ण भट्टकाअनुसार राति लेदोसहित पहिरो खसेका कारण सडक अबरुद्ध भएको हो । सोहि...
काठमाडौं &ndash; कोरोनाभाइरसको महामारीका बीचमा देशभर सार्वजनिक यातायात र लामो दूरीमा संचालन हुने यातायातका साधन संचालनमा समस्या भइरहेको विषयलाई ध्यानमा राखेर इजी ट्याक्सी नेपाल एपले दसैँमा घर जाने व्यक्ति तथा परिवारहरुका लागि ट्याक्सी सेवा संचालनमा ल्याएको छ । विगत लामो समयदेखि उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा सुरक्षित तरिकाले संचालन गर्नको...
मण्डिखाटारमा भयानक कार दुर्घटना : बिजुलीको पोल भाँचियो, चालक भने बाँचे
काठमाडौं - बुधबार राति सवा ११ बजे। काठमाडौंको मण्डिखाटारमा एउटा रातो रङ कार गुड्दै थियो। चालकले स्टेरिङ, एक्सिलेटर, ब्रेक र क्लजको सन्तुलन गुमाउँदा उक्त कार केहीबेरमा सडक छेउतिर मोडियो र बिजुलीको पोलमा ठोक्कियो। कारको गति यति तीव्र थियो कि सिमेन्टको बिजुलीको पोल नै भाँचियो। संयोगले कार चालकलाई भने ठूलो चोट लागेन। रातिको...
६ महिनासम्म ग्यारेजमा थन्किएका लामो दुरीका यातायात आजबाट संचालनमा आए
काठमाडौं &ndash; गत चैत ११ गतेदेखि बन्द लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन आजबाट सन्चालनमा आएका छन् । कोरोना सक्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाएर सरकारले ६ महिनापछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । आज विश्वकर्मा पूजाको दिन परेको र पूजा सकेर गाडीहरु चल्ने यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् । साबिक भाडामा ५० प्रतिशत...
लामो दुरीको यातायात असोज १ देखिनै सञ्चालनमा आउने,भाडा ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं - लामो दुरीको यातायात असोज १ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । र, व्यवसायीले साविकको भाडादरमा ५० प्रतिशत बढाएर लिन सक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । साथै संक्रमणको...
असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात सुचारु गर्न दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं - सरकारले असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायातका साधन सुचारु गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैतदेखि बन्द रहेका आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायात असोज ५ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारले चैतमा लकडाउन घोषणा गरेयता...
सरकारले कुनै विकल्प नदिएको भन्दै असोज १ बाट सबै सार्वजनिक यातायात चलाउने व्यवसायीको घोषणा
काठमाडौं - ६ महिनासम्म सरकारले कुनै विकल्प नदिएको भन्दै यातायात व्यवसायीले सबै सार्वजनिक यातायात चलाउने घोषणा गरेका छन् । यसबारे औपचारिक निर्णय बिहीबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमार्फत गरिने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । बुधबार यातायात व्यवस्था विभागमा भएको छलफलमा महासंघसहित यातायातसँग सम्बद्ध मजदुर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारलाई सार्वजनिक...
लामो दुरीको यातायात भदौ मसान्तसम्म नचल्ने
काठमाडौं - सरकारले अन्तर जिल्ला तथा लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान भदौ मसान्तसम्म नखोल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले भदौ १५ सम्मका लागि गरेको स्थगतलाई भदौ मसान्तसम्म लब्याएको एक मन्त्रीले बताए । यसअघि अन्तरजिल्ला यातायात तथा हजाई उडान भदौ १ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय भएको थियो...
चितवन - सुख्खा पहिरो खसेपछि नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज विहान करिब १ बजेतिर इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को ३ नम्वर पुल नजिक सुख्खा पहिरो खसेको हो। पहिरो खसेसँगै सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। केही बेरमा पहिरो पन्छाउने काम शुरु हुने जनाइएको छ। पहिरो...
यातायातमन्त्री नेम्वाङले भने- 'छोटो दूरीको गाडी चल्छ,लामो भदौ मसान्तपछि मात्रै सञ्चालन हुन्छ'
काठमाडौं &ndash; भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले लामो दूरीको यातायात भदौ मसान्तपछि मात्रै सञ्चालन हुने बताएका छन्। मन्त्री नेम्वाङले अहिले चलिरहेका छोटो दूरीका सवारी साधनहरु भने सञ्चालन भइरहने बताए। काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारी साधनहरु अहिले जसरी नै चल्छन्। हामीले १ गतेदेखि मध्यम दूरी र लामो दूरी भनेको यातायात सेवा भने भदौ...
लामो दुरीको यातायात र हवाई सेवा भदौ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं &ndash; सरकारले अन्तर जिल्ला यातायात र बाह्य तथा अन्तरिक हवाई उडान भदौ १५ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड&mdash;१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी)को सिफारिसअनुसार १ भदौबाट खुला गर्ने भनिएको क्षेत्र थप १५ दिन नखोल्ने निर्णय गरेको हो । ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार महिना...
भाद्र १ गतेदेखि पनि लामो दुरीका यातायात,विद्यालय र हवाई उडान नखुल्ने
काठमाडौं - अन्तर जिल्ला यातायात र बाह्य तथा अन्तरिक हवाई उडान भदौ १ गतेदेखि नखुल्ने भएको छ । कोभिड&mdash;१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी)को आइतबार बसेको बैठकले यसलाई १५ दिन पर सार्न सिफारिस गरेको हो । ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार महिना लामो लकडाउन अन्त्य गर्दै अन्तर जिल्ला यातायात, बाह्य तथा...
आजबाट सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर लागु
काठमाडौं &ndash; काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लाहरुमा आजबाट सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर&ndash;बिजोर लागु भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले फेरि जोरबिजोरको आधारमा सवारी साधन सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र दुई सय जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा जोर&ndash;बिजोर लागु गरिएको छ । आज साउन...
पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकखण्ड अवरुद्ध
बुटवल - भारी वर्षापछि तीन स्थानमा पहिरो जाँदा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल&ndash;पाल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा पर्ने झुम्सा पुल नजिकै पानी मिल, दोभान नजिकै नाग मन्दिर र माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिर नजिक सडकमा गएराति पहिरो खस्दा सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि उक्त सडकखण्ड भएर...
६ दिनपछि नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड दुईतर्फी सञ्चालन
चितवन &ndash; पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नौबिसे&ndash;मुग्लिङ सडकखण्ड ६ दिनपछि खुलेको छ । पहिरोका कारण अवरुद्ध यो सडकखण्डमा गएरातिदेखि दुईतर्फी नै गाडी चल्न थालेको हो। मौवाखोलाको पुल मर्मतको काम सकिएपछि रातिदेखि नै गाडी चल्न थालेका हुन् । मौवाखोलामा रहेको पुलको केही भाग बगेपछि यो सडकखण्ड यही साउन ५ गतेदेखि बन्द भएको थियो । यसैगरी...
काठमाडौं प्रवेशका लागि अझै पनि पास अनिवार्य
काठमाडौं &ndash; सरकारले मंगलबार रातिदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउन खुला भएको बताए पनि काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा भने अझै पनि पास अनिवार्य चाहिने भएको छ । लकडाउन खुला भएपनि बाहिरी जिल्लाबाट आउने सवारी साधनमा रोक लगाइएकाले पास लिनुपर्ने व्यवस्था निरन्तर रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । लकडाउन सकिएको भए पनि काठमाडौं प्रवेशका लागि पास...
मुग्लिन- नारायणगढ सडकखण्डको बतासेडाँडामा पनि पहिरो
चितवन -मुग्लिन- नारायणगढ &nbsp;सडकखण्डमा पुनः पहिरो खसेको छ । भरतपुर महानगरपालिका&ndash;२९ स्थित पन्ध्रकिलो नजिक बतासेडाँडामा पहिरो खसेको हो । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख ई कृष्णराज अधिकारीका अनुसार चारकिलोको पहिरो पन्छाएर सडक एकतर्फी बनाएको केही घण्टामै पुनः पहिरो खसेको हो । ठूलो चट्टानसहित पहिरो खसेका कारण नारायणगढ&ndash;मुग्लिन सडक अवरुद्ध बनेको छ ।...
काठमाडौं - अन्तर जिल्ला चल्ने मध्यम तथा लामो दूरीका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन भदौ १ गतेदेखि मात्र सञ्चालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भदौ १ देखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यातायात व्&zwj;यवसायीहरुले साउन ८...
पृथ्वी राजमार्गमा २ सय भन्दा बढी पहिरा,सडक सचारु गर्न कम्तीमा दुई दिन लाग्ने
चितवन &ndash; पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन&ndash;नौबिसे सडकखण्डमा साना&ndash;ठूला २०० भन्दा बढी पहिरो खसेका छन्। चितवन र धादिङ जोड्ने मौवाखोलाको पुल र सडक जोड्ने भाग नै बगाएको छ। सो खण्ड डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले हेर्ने गर्दछ। कार्यालयका प्रमुख ई कृष्णराज अधिकारीका अनुसार आज पनि ठाउँठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। बिहान मात्र जोगिमारामा ठूलो...
सरकारको क्षमता र गच्छेअनुसार यातायात व्यवसायीका माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको क्षमता र गच्छेअनुसार यातायात व्यवसायी एवं यस क्षेत्रका मजदुरहरुको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यातायात क्षेत्रका समस्या एवं विभिन्न मागहरु लिएर चारवटा संगठनका प्रतिनिधिहरु विहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा यातायात मजदुर र व्यवसायीका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना...
यातायात व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं -&nbsp; यातायात क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि निर्माण गरिएको कार्यदलले आज बिहान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल &lsquo;प्रचण्ड&rsquo;सँग भेट गरेको छ ।&nbsp; अध्यक्ष निवास खुमलटारमा भएको भेटमा व्यवसायीहरुले कोभिड&ndash;१९ पश्चात यातायात सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले यातायात व्यवसाय मध्यम...
भोलिदेखि साझाले २६ बस संचालन गर्दै, कुन-कुन रुटमा चल्नेछन् ?
काठमाडौं - साझा यातायातले बिहीबारदेखि प्रारम्भिक चरणमा २६ वटा बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। साझाले यसअघि बस चल्दै आएका ८ वटा रुटमा सेवा सुरु गर्न लागेको जनाएको छ। साझाका २६ वटा बसले साउन १ अर्थात् भोलिदेखि ८ वटा रुटमा सेवा दिने साझाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए। कोरोना संक्रमणको जोखिमकै...
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको १७ किलोमा सडक थप भासियो
चितवन - नारायणगढ&ndash;मुग्लिन सडकखण्डको १७ किलोमा सोमबार राति सडक थप धसिएपछि सवारी एकतर्फी भएको छ । सो ठाउँमा सोमबार बिहान ग्राबेल हालेर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि पुनः धसिएसँगै त्यस ठाउँमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख ई कृष्णराज अधिकारीका अनुसार यसअघि सो ठाउँमा थप धसिएपछि...
पूर्वी नवलपरासीमा बाढीले डाइभर्सन बगायो,पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
चितवन - पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गैँडाकोट नगरपालिका&ndash;९ थुम्सीस्थित खहरे खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि शनिबार बिहान चार बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । लगातारको वर्षाले डाइभर्सनमा राखिएको कल्र्भट बगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका प्रहरी निरीक्षक चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । बाटो बन्द...
काठमाडौं - यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वातावरण तयार गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी नखुलाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले बिहीबार मात्रै जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको...
काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस बारेको जानकारी दिएका हुन्। खतिवडाले असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीनवटा जिल्लालाई एउटा जिल्ला मानेर सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय भएको बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यका भित्र काठमाडौं, ललितपुर र...
लकडाउनकै बेला झण्डै साढे तीन लाख चालक अनुमतिपत्र छापिए
काठमाडौं - यातायात व्यवस्था विभागले बन्दाबन्दीमा झण्डै साढे तीन लाख चालक अनुमतिपत्र छापेको छ । चालु आवको अहिलेसम्म साढे छ लाख अनुमतिपत्र छापिएको छ । झण्डै दुई लाख अनुमतिपत्र छपाइ गर्न बाँकी छ । गत पुस मसान्तसम्म नयाँ अनुमतिपत्रका लागि लिइएको परीक्षा उर्तीण र नवीकरणका लागि आएका अनुमतिपत्र छापिएको छ ।...
नयाँ बसपार्क नजिकै एक ग्यारेजमा आगलागी ,८ माइक्रोबस जले
काठमाडौं - काठमाडौँको नयाँ बसपार्क नजिकै रहेको एक ग्यारेजमा आइतबार बिहान अगलागी हुँदा ८ वटा माइक्रो बसमा क्षति पुगेको छ । आगलागीबाट ८ वटा माइक्रोबसमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको हो । बा १ ज ९६०९, बा २ ख २०८०, बा १ ज ९४५८, बा २ ज १०९६, बा ३ ख ८५८९,...
काठमाडौं - संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को एक सवारी भित्र यौन सम्पर्क गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भईरहेको छ । यो भिडियो इजरायलको भएको पाईएको छ । इजरायलको तेल अवीवको समुद्री किनारको व्यस्त सडकमा गुडिरहेको गाडी भित्र देखिएको यस्तो गतिविधिलाई एक घरको छतबाट भिडियो कैद गरिएको बताईएको छ ।इजरायलको &lsquo;द...